Izinto eziguquguqukayo zoqoqosho kwintengiso, zithini? | Ezezimali
IClaudi Casal | | I ngxaki, Uqoqosho ngokubanzi
Kubalulekile ukuba uqhelane nokwahlukileyo Izinto eziguquguqukayo kuqoqosho olukhulu, ukwazi ukuba ziyintoni kwaye zisiphembelela njani njengabemi.
Ngesi sizathu, ngezantsi Siza kukuxelela yonke into enxulumene nezinto eziguquguqukayo zoqoqosho olukhulu kunye noqoqosho.
1 Izinto eziguquguqukayo kuqoqosho olukhulu, zeziphi?
2 Zeziphi izifundo zoqoqosho olukhulu ezinokusetyenziselwa
3 Imeko yezopolitiko kunye nezoqoqosho olukhulu
4 Zeziphi iindlela ezisetyenziswayo
5 Kwenzeka ntoni xa utyala imali kumazwe aphesheya
6 Zeziphi ezona zinto zixabisekileyo zoqoqosho olukhulu
6.1 Imveliso yasekhaya encangathi
6.2 Intlawulo yomngcipheko
6.2.1 Ibalwa njani le ntlawulo?
6.3.1 Zeziphi izinto ezenzeka ngaphakathi kwamaxabiso
6.4 Amaxabiso enzala kukwahluka koqoqosho olukhulu
6.5 Ixabiso lotshintshiselwano
6.6 Ibhalansi yeentlawulo
7 Ukungaqeshwa njengokwahluka koqoqosho olukhulu kwilizwe
8 Ukubonelela kunye nezalathiso zebango ngokwahluka koqoqosho olukhulu
9 Imfuno ebonelelweyo kunye nonikezelo
10 Izinto eziguquguqukayo zeMicroeconomic: zithini?
Izinto eziguquguqukayo kuqoqosho olukhulu, zeziphi?
La Injongo yeenguqulelo zoqoqosho olukhulu, jolisa ekufumaneni ukuba loluphi uhlobo lomsebenzi wezoqoqosho elizweni kwaye njengesiseko bakholelwa ukuba luyakuguquka kwiinyanga ezikuloo ndawo inye. Ukuze kwenziwe la manani, kwenziwa ntoni sithathele ingqalelo izikhombisi ezithile esiza kuthi ngazo sazi imeko yezoqoqosho yelizwe, lithini inqanaba labo lokhuphiswano lwehlabathi kwaye ilizwe lisingise phi.
Emva kokwenza olu phononongo ungazi zeziphi iinkampani zezona ziqhuba kakuhle ngaphakathi elizweni kwaye kananjalo, ukwazisa ukuba zeziphi iinkampani ezifumaneka kakuhle kweli lizwe.
Zeziphi izifundo zoqoqosho olukhulu ezinokusetyenziselwa
Izifundo zokwahluka koqoqosho olukhulu zingasetyenziselwa ukuthenga enye okanye iinkampani ezininzi ngaphakathi elizweni. Uqoqosho olukhulu lubalulekile Kungenxa yokuba yile yeendlela kunye nezindululo zopolitiko, ezemali kunye nezemali.
Ngokusebenzisa Izinto eziguquguqukayo zoqoqosho olukhulu unokukwazi ukuzinza kweendleko zezinto ngaphakathi kwilizwe kwimarike yasimahla. Kuyaqondakala ukuba ilizwe lizinzile xa amaxabiso enganyuki okanye ehle nanini na.
Ngokusebenzisa uqoqosho olukhulu, kwenziwa inzame yokuba nenqanaba elipheleleyo lomsebenzi kubo bonke abemi belizwe. I-Macroeconomics ijolise ekufundeni yonke imimiselo enxulumene nelizwe namanye amazwe ehlabathi.
Imeko yezopolitiko kunye nezoqoqosho olukhulu
Uhlalutyo olwenziwe ukuba lwazi Ukwahluka koqoqosho olukhulu, kufuneka zihlale zenziwa ukuze zikwazi ukumisela naluphi na uhlobo lomngcipheko wezopolitiko kuqoqosho lwangoku okanye kuqoqosho lwexesha elizayo.
Xa utyalo-mali oluvela phesheya lwamkelwe, lo mngcipheko uphindaphindwe kabini kuba urhulumente othengisayo angakufihla ukusebenza okanye abambe iiasethi zeenkampani.
Zeziphi iindlela ezisetyenziswayo
Oku kunokwenziwa ngokuhlengahlengisa ukungena kwemali okulindelekileyo ngaphakathi kwiprojekthi. Ungayenza usebenzisa i- amaxabiso ezaphulelo ahlengahlengiswe kumngcipheko kuhlahlo-lwabiwo mali olupheleleyo lwelizwe.
Indlela efanelekileyo yokwenza Ukulungelelanisa ukuhamba kwemali kwiiprojekthi ezizodwa ezisebenzisa useto lwehlabathi kwiiprojekthi ezahlukeneyo.
Kwenzeka ntoni xa utyala imali kumazwe aphesheya
Zamkelwa nini Utyalomali lwangaphandle, lo mngcipheko uphindwe kabini ukusukela oko urhulumente othengisayo anokufihla intsebenzo okanye athabathe iiasethi zeenkampani.
Oku kunokwenziwa ngokuhlengahlengisa ukungena kwemali okulindelekileyo ngaphakathi kwiprojekthi. Ungayenza usebenzisa i- amaxabiso ezaphulelo ezihlengahlengisiweyo kumngcipheko kuhlahlo-lwabiwo mali olupheleleyo lwelizwe.
Indlela efanelekileyo yokwenza oku kukulungelelanisa ukuhamba kwemali kwiiprojekthi ezizodwa ezisebenzisa uhlengahlengiso lwehlabathi kwiiprojekthi ezahlukeneyo.
Zeziphi ezona zinto zixabisekileyo zoqoqosho olukhulu
Emva koko siza kujonga ngakumbi okona kubalulekileyo kuqoqosho olukhulu:
Ngaphakathi kokuguquguqukayo koqoqosho olukhulu, enye yezinto zokuqala ukuqwalaselwa yile I-GDP. Eli lixabiso leenkonzo kunye neempahla zelizwe eziveliswa ziinkampani. Abantu abasebenza ngaphakathi kwendawo ngexesha elithile babaliwe. Amacandelo ezoqoqosho akhoyo kweli tyala ngamabanga aphantsi, aphezulu naphakamileyo.
Ukuze ube umahluko wokwenene woqoqosho olukhulu, Zonke iimpahla ezivelisiweyo kwelo lizwe kufuneka zithathelwe ingqalelo, nokuba zithengisiwe okanye azithengiswanga. Isishwankathelo sayo yonke into ikwabandakanya iinkampani zamanye amazwe. Umzekelo, ukuba sijonga umahluko waseSpain, iinkampani zangaphandle ziya kuthathelwa ingqalelo nazo.
Ipremiyamu yomngcipheko okanye umngcipheko welizwe, yinto yesibini ekufuneka ithathelwe ingqalelo xa kubalwa ukwahluka koqoqosho olukhulu. Ipremiyamu yomngcipheko yipremiyamu enikwa ngabatyali mali xa bethenga ityala lelizwe.
Ezi ndleko zongezelelweyo ziyafuneka kubo bonke abatyali mali ukuze bathenge iibhondi kulo naliphi na ilizwe. Abatyalomali banikwa imbuyekezo ephezulu xa bethatha umngcipheko wokuthenga kumazwe ukuze bafumane imbuyekezo elungileyo.
Ibalwa njani le ntlawulo?
Onke amazwe akhupha iibhondi ezitshintshisanayo iimarike ezizisekondari kwaye apho izinga lenzala lisetwa ngokweemfuno. Ipremiyamu ibalwa ngumahluko phakathi kweebhondi zeminyaka eli-10 ilizwe elinazo kwi-European Union, xa kuthelekiswa nezo zikhutshwa yiJamani.
Ukunyuka kwamaxabiso yenye yeendlela Izinto eziguquguqukayo kuqoqosho olukhulu okubaluleke ngakumbi, kuba yeyona ibonisa ngokuthe ngqo ukunyuka kwamaxabiso ngendlela ebanzi.
Ngokubanzi, kwenziwa iakhawunti yonyaka omnye kwaye oku akubandakanyi iimpahla zelizwe kuphela, kodwa nazo zonke iinkonzo.
Zeziphi izinto ezenzeka ngaphakathi kwamaxabiso
Ngaphakathi Ukunyuka kwamaxabiso zininzi izinto. Enye yezona ziphambili yile imfuno; Xa imfuno yelizwe inyuka, kodwa ilizwe lingakulungelanga oko, kukho ukunyuka kwamaxabiso.
Eyesibini yile sinikezelo. Xa oku kusenzeka kungenxa yokuba indleko zabavelisi ziqala ukwanda kwaye baqala ukonyusa amaxabiso ukuze bagcine inzuzo yabo.
Ngu zizathu zentlalo. Oku kwenzeka kwimeko apho ukunyuka kwamaxabiso kulindeleke kwikamva, kodwa abaqokeleli baqala ukuhlawulisa imali eninzi ngaphambi kwexesha labo.
Amaxabiso enzala kukwahluka koqoqosho olukhulu
Yenye into ethathelwa ingqalelo yokwahluka koqoqosho olukhulu. Ngaphakathi kwelizwe, amaxabiso enzala abaluleke kakhulu ngalawo abekwe yibhanki enkulu. Imali ibolekwa ngurhulumente ezibhankini kwaye ezi bhanki zona ziyinika ezinye iibhanki okanye abantu.
Xa loo mali ibolekisiwe, isekwe kumgangatho wenzala webhanki kwaye kufuneka ibuyiselwe kunye nayo yonke imali.
Enye inqaku elibalulekileyo kwi Izinto eziguquguqukayo kuqoqosho olukhulu linqanaba lotshintshiselwano. Ixabiso lokutshintshiselana lihlala lilinganiswa phakathi kweemali ezimbini eziphambili kwaye oku kugqitywa yi-European Central Bank. Ixabiso lotshintshiselwano lelinye lawona manqaku abalulekileyo xa kusenziwa ekwazini ukuba imali yelizwe yehlisiwe okanye yehlisiwe.
Ibhalansi yentlawulo Yinto ekufuneka igcinwe engqondweni xa izama ukwazi izinto eziguquguqukayo zoqoqosho olukhulu. Apha, okubalwayo kukuhamba kwemali ilizwe elinalo ngexesha elithile, eliqhele ukuba ngunyaka omnye.
Kwimali eseleyo yeentlawulo Kukho iintlobo ezininzi zokubala ukwahluka kwezoqoqosho:
Ibhalansi yorhwebo. Intsalela yorhwebo yeyona ibangela ukuthunyelwa ngaphandle kweentlobo zeempahla, kunye neentlobo zengeniso.
Ibhalansi yeempahla kunye neenkonzo. Apha ibhalansi yorhwebo kunye neenkonzo ezilinganisiweyo zongezwa. Kulapho iinkonzo zothutho, uthutho, i-inshurensi kunye neenkonzo zokhenketho, zonke iintlobo zengeniso kunye noncedo lobuchwephesha zingena.
Ibhalansi yangoku yeakhawunti. Apha iimpahla kunye neenkonzo zelizwe zongezwa, ukongeza kwimisebenzi eyenziweyo ngogqithiso. Lo mlinganiso ukwabandakanya ukubuyiselwa elizweni kwabaphambukeli abafika kweli lizwe, uncedo lwamazwe aphesheya olunikwa amazwe amaninzi okanye iminikelo eyenziweyo kwimibutho yamanye amazwe.
Isikali esisiseko. Apha, sinesixa seakhawunti yangoku kunye neentloko zexesha elide.
Ukungaqeshwa njengokwahluka koqoqosho olukhulu kwilizwe
Ukungabikho kwemisebenzi kwilizwe linani labantu abangasebenziyo elinikwe ilizwe elinalo. Inkcazo yomntu ongaphangeliyo ngumntu ofuna ukusebenza kodwa angafumani msebenzi kwaye ayingabo bonke abantu elizweni abangasebenziyo ngelo xesha.
Ukwazi izinga lokungaqeshwa kwelizwe, Ipesenti yabantu abangasebenziyo kufuneka bathathwe ngaphezulu kwenani labantu abasebenzayo.
Ukuze kuthiwe umntu ungena kubasebenzi, kufuneka abe ngaphezulu kweminyaka eli-16 ubudala. Ngaphakathi eSpain, zimbini iindlela ezinokuthi zilinganiswe ngayo inqanaba lokungabikho kwemisebenzi kwaye yinkonzo yengqesho karhulumente okanye uphando lwabasebenzi.
Ukubonelela kunye nezalathiso zebango ngokwahluka koqoqosho olukhulu
Kule meko, izikhombisi zonikezelo zezi zixelela malunga Ukunikezelwa kwezoqoqosho kwelizwe. Phakathi kwezi zikhombisi zizalathi zonikezelo zeshishini, izikhombisi zokwakha kunye nezalathi zeenkonzo.
Ngokumalunga nezalathi zebango, zizalathi zokusetyenziswa, izalathi zebango lotyalo-mali kwaye ekugqibeleni ezo zinxulumene norhwebo lwangaphandle.
Imfuno ebonelelweyo kunye nonikezelo
Lo mzekelo zama ukuchaza imeko yezoqoqosho Ukuhlalutya ukuveliswa kwexesha kunye namaxabiso akhoyo ngokubonelela ngokudibeneyo kunye nemisebenzi yebango. Sisisixhobo esisisiseko sokufunda ukuguquguquka okungafaniyo kwimveliso kunye namaxabiso enkosi kwimodeli yemathematics enokuthi imelwe ngokomfanekiso. Siyabulela esi sixhobo, sisebenza ukuxhasa ukuqonda iziphumo zemigaqo-nkqubo yoqoqosho eyahlukileyo kwaye njengesiphumo sokukwazi ukuhlalutya ifuthe kuguquguquko lwe-macroeconomic.
Izinto eziza kwenziwa kolu hlalutyo zezonikezelo kunye nemfuno ehlanganisiweyo.
Imfuno ehlanganisiweyo: Yimbonakalo yentengiso yeempahla kunye neenkonzo. Yenziwe kukusetyenziswa kwabucala, utyalomali lwabucala, inkcitho yoluntu, kwaye kwimeko zoqoqosho oluvulekileyo lwentengiso yangaphandle (ukuthunyelwa kwelinye ilizwe kunciphisa ukungenisa ngaphakathi).
Umrhumo wongezwa: Lixabiso elipheleleyo leempahla kunye neenkonzo ezinikezelwa ngamaxabiso ahlukeneyo ahlukeneyo. Ke le modeli isetyenziselwa ukuhlalutya ukunyuka kwamaxabiso, ukukhula, intswela-ngqesho kwaye, ngamafutshane, indima edlalwa ngumgaqo-lawulo wemali.
Izinto eziguquguqukayo zeMicroeconomic: zithini?
Ngaba ezo zinto zixabisekileyo Inkxalabo yokuziphatha koqoqosho lomntu ngamnye. Banokuba ziinkampani kunye nabathengi, abatyali mali, abasebenzi kunye nokunxibelelana kwabo neemarike. Izinto eziza kudlalwa ukuze zihlalutywe zihlala ziimpahla, amaxabiso, iimarike kunye neearhente ezahlukeneyo zoqoqosho.
Kuxhomekeke ekubeni yeyiphi na iarhente nganye efundwayo, ezinye izifundo okanye ezinye zisebenza. Umzekelo kubathengi, ithiyori yomthengi ithathelwa ingqalelo. Ukusuka apha, ukhetho lwakho, uhlahlo-lwabiwo mali, ukusebenziseka kweemveliso kunye neentlobo zeempahla, zikuvumela ukuba ufumane ukuba kuya kwenzeka njani ukusetyenziswa. Ngokufanayo, kwiinkampani, kukho ithiyori yomvelisi njengomsebenzi wemveliso, ukunyusa inzuzo kunye neendleko zegophe. Ngokubhekisele kwiimarike, ubume kunye neemodeli zokhuphiswano olugqibeleleyo nolungafezekanga zihlala zihlalutywa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » I ngxaki » Izinto eziguquguqukayo zoqoqosho
UCARMEN JULIANA VERDESOTO CHANGO sitsho
NDIYAFANANA NEENKCUKACHA ZAKHO KWIINDAWO EZAHLUKILEYO ZEZOQOQOSHO OJONGA KUZO. NDIMLANDELA IIMPAPASHO ZAKHO, NDINGUMFUNDI WOLAWULO LWAMASHISHINI KUNYE NOPAPASHO LWAKHO LUNONCEDO KUMSEBENZI WAM.
SIYAVULELA USUSANA URBANO ..
AMAGAMA AM NGUJULIANA ..
NDISUKA ku-ECUADOR ..
Phendula CARMEN JULIANA VERDESOTO CHANGO
Olu papasho kufuneka lufunde bonke abantu kwaye luyakutshintsha umhlaba kwiinkalo ezininzi, kubaluleke kangakanani ukuba nembono yokuba uqoqosho lwamazwe ahlukeneyo luhamba njani kwaye luthathe ezinye iindlela. Imibuliso evela eQuito-Ecuador.
Ulwazi olulungileyo; nangona ibhalwe kakubi kancinci kwaye ezinye iindawo azingqinelani.
UCarlos R. Grado Salayandia sitsho
Ukusetyenziswa kwezinto eziguquguqukayo kwezoqoqosho kubaluleke kakhulu ukuba ilizwe libe nemithombo ethembekileyo, yokwenyani. injongo kunye nexesha elifanelekileyo lezinto eziguquguqukayo zoqoqosho, ukuze bazi imeko yabo yokwenyani kunye nexesha elifanelekileyo, ukulungiselela izicwangciso zoqoqosho zesizwe ezibanzi kunye noqikelelo, ukuze iiyunithi zezoqoqosho zikwazi ukwenza izigqibo kufutshane nenyani yexesha elizayo, ukuseka inkqubo yolawulo lwezi zinto zixabisekileyo, kunye Ngaphezu kwako konke ukuseka iindlela zokulinganisa ukwazi imeko yabo, iziphumo kunye nokuthotyelwa kuqoqosho lweeyunithi zoqoqosho.
Phendula uCarlos R. Grado Salayandia
Ukulinganiswa kweGolide yeSilivere